Yeyiphi indlela efanelekileyo yokuthengisa imibala kwiofisi? - Office Color Schemes
Home » Yeyiphi indlela efanelekileyo yokuthengisa imibala kwiofisi?
Yeyiphi indlela efanelekileyo yokuthengisa imibala kwiofisi?
Imibala eofisini yakho inokuphumeza okungaphezulu kokwenza ipop! Izicwangciso zemeko yakho yokwenza imeko ixhasa umfanekiso wakho kunye nokuchaphazela kakhulu inzuzo yabasebenzi, ukukhuthaza kunye nemeko enkulu yengqondo. Thatha ingqalelo ezi patheni ukunceda ubonise ubume beofisi yakho ixesha elide elizayo.
I-Ultra Violet: Yenza isibhengezo ngombala wonyaka wePantone-ulusu lwe-Ultra. Ucinga ngesithunzi esimdaka sikaThixo, ubukhali, buyamangalisa, kwaye buzisa imvakalelo yokuqiniseka kunye namandla kwigumbi ngalinye. Nokuba ngaba indawo yakho ayibhadwanga okanye ibubukhazikhazi, lo mthunzi uguqukayo ngokwanele ukuba uqhubeke nawo nawuphi na isicwangciso somthunzi kwaye ungasetyenziswa ekuqinisekisweni kweziqwenga ezigxininisiweyo.
Iithoni rhoqo: Ngeplani ye-biophilic, ipatheni ephuhlayo edibanisa iinxalenye zehlabathi eliqhelekileyo kwimeko yokusika ehlanganisiweyo, akukho nto ingalindelekanga ukuba iitoni ezityebileyo, zendalo ziya kufumaneka ngokudibeneyo kwezithuba zeofisi. Xa ubandakanya okuluhlaza ngaphakathi kunye ne-mish-mash eqhelekileyo, unokwenza imeko yokunceda eyenza abasebenzi bakwazi ukuhlala bebandakanyekile kwaye besebenza kwixesha losuku. Imibala ethile emnyama nemibala emnyama ehambelana neeblue epholileyo inokuhamba kude ekwenzeni ukungathandabuzi, imeko yala maxesha.
I-Pastels eziethe-ethe: Umntu ngamnye kunye nemibutho ithatha indlela yobomi obulungeleleneyo, njengoko kunjalo ngeepateni ezinombala! Imibala eyisiseko, ethe cwaka, efana nesanti epinki kunye neeperile emnyama, iyasebenzisana ukwenza umphetho wokusika, imeko ezolileyo nohambela phambili ukuvuselela kunye nophuhliso.
Ubumnyama buyile: Abaninzi bakuphephe ukusebenzisa ubumnyama kulwakhiwo lwabo lwangaphakathi, nangona kunjalo-onke amagumbi amnyama akuphiko. Umthunzi ujongwa njengeyona nto ifunekayo kufuneka ube nokukhanya kwento yokuba iyahambelana ngokuncomekayo kunye nokunikezelwa kwezinto, imizekelo kunye nezixhobo. Ukusuka kumgangatho ophahleni, ubumnyama bunokwenza nayiphi na imeko yomsebenzi ibonakale igudileyo, ifanelekile kwaye iphambili.
Ukusuka kwimibala egqamileyo ukuya kwimithunzi emfushane, iipateni zonyaka zinokwenza umbutho wakho unamathele ngelixa uphucula inzuzo kunye nokuphuculwa kwamazwe engqondo! Kwiindawo zeOfisi yezoRhwebo, asinokwazi nje ukujoyina inxenye yemibala emitsha etyibilikayo ukongeza eyoneleyo umfanekiso wakho. Nokuba ufuna ukwenza ifafaza kwabahluli okanye ubandakanye ukonyuka okuqaqamba ngokuzimisela kwethulo kunye nezigqubuthelo zezahlukanisi, kubalulekile ukuba ubekekishe umbutho wakho onobubele ngemizekelo, izixhobo, kwaye ngakumbi, ukufikisa.
Imibala iphembelela wonke umntu kuthi. Banikezela (ngokweemvakalelo) iimvakalelo kunye neemvakalelo kumntu ngamnye. Akumangalisi ukuba imibutho kunye nabenzi bachitha imali ekufumaneni imibala efanelekileyo yezinto zabo nakwiivenkile. Ukwenza oku kuqinisekisa abathengi ukuba bahlala ixesha elide kwezo venkile kwaye, ngokubaluleke ngakumbi, bathenga. Ngendlela efanayo, i-ofisi echanekileyo yokufaka imithunzi neengcombolo ezifanelekileyo zepeyinti yeofisi inokunceda “ukwamkela, ukukhuthaza kunye nokuwukhuthaza” umhlaba. Oku, ngenxa yoko, kunokunceda ukunyusa ukusebenza ngokufanelekileyo kunye nokuphakamisa ukuthengisa.
Uninzi lophando lubhekiswe kwimpembelelo yemibala ethile yepeyinti yeofisi kwimisebenzi yesiqhelo yeofisi njengokuqamba, ukuhlela, ukukhetha umnxeba, ukurekhoda njalo-njalo. Uphando ngokufanayo luye lwalathiswa ukuze babone ifuthe le-ofisi lokuthatha iingcinga zokuphucula ubume, impumelelo, ukuphunyezwa kunye nokufezekiswa. Iinjongo zazo zonke ezi mviwo kukufumana imibala yeofisi efanelekileyo yokupeyinta kunye nezicwangciso ezingaphucula ukuphuculwa kweengcali kunye nokwenza kakuhle ngaphakathi kwezithuba zeofisi. Uphando ngalunye lubonakalise unxibelelwano phakathi kobushushu babasebenzi kunye neengcinga ezikwi-office shading.
Nazi iingcebiso ezimbalwa ezivela kubaqambi abaziingcali kunye nabanyibilikisi bezithunzi ukukhetha imibala epeyinti efanelekileyo yeofisi.
Cinga ishishini-Imibala engathathi cala yoyilo ilungele imibutho yokwenene. Oko bekutshiwo, abahlali kumagumbi okusebenzela ngokufanayo baya kuthatha isigqibo ngendawo yokupeyinta imibala ngokuxhomekeka kubuntu babo. Kwimeko apho unqwenela ukudlulisa imvakalelo yokomelela kulwakhiwo lwe-stylistic, khetha imibala efudumeleyo nenesidanga ngathi yityheli, orenji njalo njalo kuthathelwa ingqalelo ukuba abanamandla amakhulu. Iingcali ze-Feng shui zokufaka umngxunya ubukhulu becala zicebisa izithunzi ezikhanyayo zetyheli kwiindawo zomsebenzi kuba ezi ziluncedo ekusetyenzisweni kobuchule kunye nemiba enxulumene nolwazi. Ngempembelelo zokuthula, iingcali zicebisa izithunzi ezinje-luhlaza-luhlaza njalo njalo. Kwiindawo zomsebenzi ezisetyenziswa ngabacwangcisi, ababhali njalo njalo, umntu unokukhetha iithunzi ezifana nphuzi ,orenji kunye nobomvu. Kwiingcali, ukusetyenziswa kweetani ezithuleyo, iitani kunye nokudlwengula kunceda ukuhambisa i-psyche kwaye ngaphezulu kunceda ukulungisa. Imibala epholileyo efana nebhulowu noluhlaza icingelwa imisebenzi ephazamisayo efana neyomcebisi wezomthetho, umgcini weencwadi njalo njalo njengoko olu ncedo luhambisa ukungafunwa nokuzola.
Cinga ukufikeleleka kwegumbi lezithuba ezincinci zeofisi, umntu unokukhetha imibala yepeyinti eofisini, emhlophe, beige, njalo njalo, ngakumbi eluphahleni, njengoko oku kunokunceda ekwenzeni umbono wegumbi elikhulu. Kwelinye icala, imibala emnyama ayilunganga kumagumbi amakhulu eofisi njengoko ezi zinokwenza ukuba igumbi libe nokuncipha kwaye lihlale kamnandi.
Gxila ekubethelekeni kokuntywila kombala kwi-Therapists njengoAngela Wright ukongeza ukuxhalaba kukuntywiliselwa kombhalo ngokuchasene nokufaka umthunzi ngokwawo. Oku kuthetha ukuba amandla okutshintsha komzimba yinto yokuba uninzi lwefuthe lokuphathwa kwabasebenzi kunye nokuziphatha kunokuba ichaphazele ngokwayo. Kuyo yonke le migca, ukuqina okuqaqambileyo nokubengezela kuyakomeleza ngelixa ishafti elula ngokuntywiliselwa okusezantsi iya kuzola.
Xela lo ntengiso
Okwangoku masifunde ezinye zeengcinga ezintle ze-office shading njengoko kucetyiswe nguAngela Wright kunye nendlela abasibambisa ngayo:
Iblue ivuselela i-Mind-Angela Wright icebisa ukusebenzisa ohlaza okwesibhakabhaka kwiindawo zomsebenzi ezichaphazelekayo ngabagcini beencwadi okanye iingcali ezahlukeneyo ezifuna ukwenza umsebenzi omninzi wengqondo. U-Angela kuyo nayiphi na imeko, ngokufanayo ucebisa ukusebenzisa i-bluu ngamafafaza e-orange ukunceda ukulungelelanisa ukusebenza kwengqondo kunye nokongezwa kokuchukumisa kokuziva kwisitayela.
Amthubi axhase i-Emotions-Le shading efanelekileyo yenza imibala epeyinti eofisini egqibeleleyo njengoko ihambisa isazela njengomphefumlo. Ifanelekile kwiimfashini nakwimimandla eyahlukeneyo apho ubuchule bufuneka khona.
Olu luhlaza lulungiselelwe uBala-Sebenzisa i-green office e-shading yakho kwiingcinga ngakumbi apho imali izakutshintsha izandla rhoqo. Uhlaza luzisa ukulingana, ukuthula kunye nentuthuzelo.
Iziphumo eziBomvu zoMzimba-Bomvu zinceda ukuba kubonakale umgangatho ngokomzimba kunye nokunyuka. Ifanelekile kumaziko okugcina, indawo yokusebenza apho abasebenzi bokwexeshana kunye nabaphuhlisi besebenza okanye bedibana nabathengi kunye neendawo ezahlukeneyo apho umntu enokufuna indawo yentlalo okanye ethandekayo.
Okubalulekileyo kukugxila ekukhetheni imibala yeofisi yakho epeyinti
Akukho mibala yeofisi esepeyini engasetyenziswanga sisetyenziselwa yona.
Khetha ukuba yeyiphi na imibala ofuna ukuyichaphazela: Inqondo / umzimba / ulungelelwaniso / iimvakalelo.
Khetha umthunzi othile kwaye emva koko ukhethe indlela ekhethekileyo okanye ethobekileyo yokufumana ukuba ufuna ukuba njalo.
Imibala ayikho kwindawo ekhuselekileyo Basebenza bhetele xa behlanganiswa imibala eyahlukeneyo.
Ezi zimbalwa zemibala ephezulu yokupeyinta eofisini kunye neengcinga ze-office shading usebenzisa ozoxhasa umoya wabasebenzi kunye nokuphucula izivumelwano zakho.
Kitchen With Chocolate Color For Ca
Restoration Hardware Colors Brown F
Blue And Orange Color Scheme For Li
Bronze Wall Colour Goes With Cream